Buy Jewel Residence For Sale (ID-683) (1,800Lks) in ရန်ကင်း on ipivi.com
Jewel Residence For Sale (ID-683)
Jewel Residence for sale in Yankin Township. Living area - 1350 sqft ,organized by Living-room, Two Master Bed-rooms, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Four air-conditioners and Gym are already included.
SALE PRICE - 1800 Lakhs (Nego)
ရောင်းရန်ရှိသော Jewel Residence မှာ ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခန်းအကျယ် - ၁၃၅၀စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် နှစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ Gym နှင့် လေအေးပေးစက် လေးလုံး ပါရှိပါသည်။
Jewel Residence ၏ အရောင်းဈေးနှုန်း - သိန်း ၁၈၀၀ (ညှိနှိုင်း)
ရောင်းရန်ရှိသော JewlelResidence (ID-683)
အမည်: Jewel Residence For Sale (ID-683)